Ahoana ny fomba hampianarana alika amin'ny fisaka | Tontolo alika
Ankehitriny dia olona an-tapitrisany no mipetraka amin'ny fisaka, zavatra lôjika tanteraka satria ny antsasaky ny mponina manerantany dia monina any an-tanàna, satria teo no nahitany asa. Saingy, afaka manana alika ao amin'ireo trano ireo ve ianao?
Eny ny valiny, raha mbola manazava aminao ny tompony 🙂. Raha izany dia vakio hatrany raha te hahalala ny fomba hampianarana alika amin'ny fisaka.
1 Omeo sakafo sy rano izy
2 Ampianaro hatramin'ny mbola kely izy
3 Ampianaro izy tsy hitabataba
4 Ampidiro izy mba hialana amin'ny fako tsy ilaina
5 Aza avela hiala
Omeo sakafo sy rano izy
Tena fototra izy io, saingy ilaina ny miteny hoe: ny alika dia tsy maintsy manana rano fisotro madio sy madio misy foana. Ho fanampin'izay dia ilaina ny manome sakafo azy a sakafo avo lenta, izay tsy misy serealy na vokatra azo avy aminy, impiry ilaina arakaraka ny taonanao, ny fahasalamanao ary ny zavatra ataonao isan'andro.
Mba hisorohana ny fandotoana ny gorodona, any amin'ny fivarotana biby fiompy dia hahita karazana tsihy vitsivitsy isika (mitovy amin'ireo amidy amina fivarotana solosaina ho an'ny totozy amin'ny solosaina) izay hametrahantsika ny trough and trough. Mora ny manadio azy ireo ary hisoroka ny biby tsy hamela ny soritry ny sakafo amin'ny toerana tsy tokony.
Ampianaro hatramin'ny mbola kely izy
Ny alika dia mila mianatra andian-dahatsoratra hahafahana miaina eo amin'ny fiaraha-monina. Noho izany dia tsy maintsy manomboka mampianatra azy ireo haingana araka izay tratra ianao, ary inona no fomba tsara kokoa noho ny fanaovana izany ao an-trano izay tsy dia misy fanentanana firy toy ny any ivelany. Fa ahoana no hanaovana azy?
Mampiasà teny mitovy hatrany isaky ny baiko. Ohatra, raha tiantsika hipetraka izy dia hiteny hoe "Mipetraha" na "Mipetraha" isika, na raha mangina izy hangina dia hiteny hoe "Mangina".
Aza atao milaza ny anaranao alohan'ny baiko, satria mety tsy hamaly antsika izany. Aleo miteny hoe "Avia Kira" toy izay "Kira avia". Fa maninona Satria ny anarany dia teny izay haverintsika be mandritra ny androm-piainany, ary tsy maintsy misy dikany tsy miandany ho azy izany.
Hampiasa ny fanaka izahay mba hampisehoana aminao zavatra. Raha misy zavatra tian'ny volom-borona ary mampiala sasatra azy betsaka koa dia manofoka. Noho izany, azontsika atao ny manafina ny fitsaboana eo anelanelan'ny ondana na eo ambanin'ny fanaka (hatrany amin'ny faritra azo aleha), milaza hoe "Karohy" ary jereo ny fahafinaretanao
Raha sanatria ka tsy tiantsika hipetraka amin'ny seza na fandriana izy dia tsy tokony avelantsika hanao azy mandritra ny iray andro izy. Isaky ny misambotra azy ao amin'ny iray amin'ireo fanaka ireo isika dia hampidina azy amin'ny fanondroana rantsan-tànana amin'ny gorodona ary miteny hoe "midina". Raha tsy miraharaha azy ianao dia handray fitsaboana izay fantatray fa tena tianao ianao, hapetrakay eo anoloan'ny orony izany ary, rehefa mihetsika ilay biby, dia hampidininay ny sandry ka ho eo amin'ny tany ny fitsaboana. Rehefa tafidina ihany ilay alika nony farany dia omentsika azy io ary araraotintsika mba hikolokoloana azy ary hiteny hoe "tsara".
Tsy mila mikapoka na mampijaly anao velively izahay. Raha mikiakiaka aminy isika, mamely azy na mampijaly azy ratsy dia hiaina ao anaty tahotra antsika ny alika, ny fianakaviany, izay midika fa tsy hiaina am-pilaminana izy. Ho biby afaka mibontsina noho ny fahatsapana ho manirery, mety hanimba izay rehetra hitany amin'ny tsy fisianay, izay mety harary noho ny fihenjanana sy ny fihenjanana miangona. Raha hanana biby isika amin'ireny toe-javatra ireny dia tsara kokoa ny tsy manana azy.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa, dia ampirisihinay hamaky Ity lahatsoratra ity.
Ampianaro izy tsy hitabataba
Ny alika dia maneho ny tenany amin'ny fiteniny, fa indraindray kosa izy hampiasa ny fibontsina sy ny fimonomonona. Ara-dalàna tanteraka ho azy izany, ary tena masiaka amintsika ny mandà azy tsy haneho ny heviny amin'izany. Raha ny tena izy, Ny fanesorana ireo tadim-peo dia voarara any amin'ny firenena toa an'i Espana.
Ny tokony hataonao dia ny mampianatra azy ho faly. Amin'izany fomba izany dia sarotra ny hiondrika amin'ny alina na rehefa irery izy. Mba hanaovana izany, ny zavatra tsy maintsy katsahintsika dia ento mivoaka mitsangantsangana isan'andro izy ary manokana fotoana betsaka araka izay tratra.
Ampidiro izy mba hialana amin'ny fako tsy ilaina
Ny fiparitahan'ny alika be loatra dia olana iray izay lavitra ny famahana azy. Betsaka ny olona maniry hanabe ny alikany ary avy eo tsy mahalala izay hatao amin'ireo zanak'alika. Betsaka amin'ireo ankizy kely ireo no hiafara eny amin'ny arabe na euthanized amin'ny kennels.
Mba hisorohana azy, tsy maintsy ataontsika voaroaka ny alikanay rehefa enim-bolana raha vehivavy, na fito volana raha lahy.
Aza avela hiala
Ny alika dia tsy maintsy miaina miaraka amintsika. Na dia manana lavarangana na tokotanin-tsambo aza isika dia mendrika ny hiaina toy ny fianakaviana ny alika, miaraka amin'ny fianakaviana. Raha avelantsika any ivelany mandritra ny tontolo andro izy dia hahatsapa ho ratsy izy ary mety handratra ny tenany.
Amin'ireto torohevitra ireto dia afaka miaina am-pifaliana ao anaty trano ny alikantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampianarana alika amin'ny fisaka